Ungatengesa sei paVinted: matanho aunofanira kutora uye asingazivikanwe manomano | ECommerce nhau
Ungatengesa sei paVinted
Encarni Arcoya | | Kutengesa nhare
Nguva zhinji tinounganidza hembe uye zvinhu kumba izvo, pakupedzisira, isu hatishandise, kana isu tinongozviita kamwe chete zvisati zvaperera kuseri kwekodhi. Dambudziko nderekuti, nekufamba kwenguva, zvese zvinotora nzvimbo, uye kana uchiraira, unowana zvinhu izvo zvisingachakushandire, iwe zvausingade kana kuti hazvina kukosha iwe. Kana izvozvo zvikaitika, zvinotsamwa kwazvo, nekuti imari inoshandiswa. Asi wadii kuita purofiti mairi? Nhasi tinoda kukuratidza maitiro ekutengesa paVinted.
Kana iwe waona kanoverengeka kushambadzira paterevhizheni nezvekuti ungatengesa sei paVinted Uye iwe wakatorumwa neiyo yekuda kuziva bug, tarisa pane zvazvinoreva uye, pamusoro pezvose, kana chiri chokwadi kuti iwe unogona kuita mari neVinted.
1 Chii chinonzi Vinted
2 Maitiro ekutengesa pane Vinted nhanho nhanho
2.1 Tengesa pane Vinted nhanho nhanho
2.2 Ungatengesa sei paVinted: matipi ayo achashanda kwazvo kwauri
2.2.1 Nyora tsananguro yechigadzirwa
2.2.2 Gadza mitengo inokwanisika
2.2.3 Tarisa pane imwechete theme
2.2.4 Mifananidzo inokwezva
3 Yakapendwa, inobatsira here?
Chii chinonzi Vinted
Vinted chikumbiro icho yakabuda mu2008 ikamhara kuSpain muna 2016, kunyangwe iri izvozvi parinenge richizivikanwa zvirinani, kunyanya nekuda kwenguva yedambudziko ratiri kusangana naro.
Iyo ine nharaunda yevanopfuura mamirioni makumi matatu nemana vashandisi uye inoita sekunge yaive online chitoro chechipiri-ruoko zvigadzirwa. Kunyangwe pakutanga pakutanga chinangwa chayo kwaive kutengeswa kwehembe dzakamboshandiswa, ikozvino zvakare inokutendera iwe kurodha zvimwe zvigadzirwa senge zvishongedzo.
Imwe yemabhenefiti ekutengesa muVinted ichienzaniswa nemamwe maficha ndeyekuti ivo havabhadhare iwe makomisheni, kana mukutengesa kana mukuchengetedza kana kana uchiisa zvinyorwa.
Maitiro ekutengesa pane Vinted nhanho nhanho
Kana iwe uchida kudzidza maitiro ekutengesa paVinted ine yakanyanya vimbiso yekubudirira, saka izvi zvinokufarira. Kune rimwe divi, iwe unofanirwa kufunga kuti ndeipi nzira yekutengesa mune iyi application. Asi, kune rimwe divi, iwe unofanirwa kuziva kuti ndeapi matanho akanakisa kutengesa uye kuti zvese zvinofamba mushe. Saka tinozvipaza iwe.
Tengesa pane Vinted nhanho nhanho
Kuti utengese paVinted, chinhu chekutanga chaunoda ndeche download iko kunyoresa. Ramba uchifunga kuti iwe unofanirwa kuongorora account yako, saka shandisa email yaunotarisa nguva dzose, nekuti zviziviso zvinosvikawo kwauri ipapo.
Paunenge uchinge uine iyo account, zvakakosha kuti uzvitsanangure pachako muchikamu che "About me". Tevere, sarudza izvo sarudzo dzekutumira dzaunoda kuve nadzo kana iwe uchitengesa.
Nhanho inotevera ndeyekuisa zvinyorwa. Izvi zvinofanirwa kuve nemufananidzo (angangoita mashanu) uye rondedzero seyakazara sezvinobvira. Kana uchitsikisa, iyo app inokupa iwe sarudzo yekuburitsa pachena zvinyorwa kana kukurudzira ivo nemitengo inonzwisisika; asi kana iwe usiri kuda kubhadhara chero chinhu, unogona kusvetuka izvi.
Zvino iwe chingori kumirira kuti mutengi akubate iwe kana kutenga chinhu kubva kwauri kuti ugone kurongedza chigadzirwa uye ugozvitumira kwavari. Tinokurudzira kuti iwe uite vhidhiyo yekuti unozviita sei, uye mamiriro echinhu, kudzivirira matambudziko. Iwe unongova nemazuva mashanu ebhizinesi kutumira pasuru.
Kana mutengi agamuchira pasuru uye achiratidza kuti zvese zvakanaka, Vinted anosunungura muripo. Izvi zvinoreva kuti kana pasuru yacho ikasasvika, kana mutengi akanyunyuta, unogona kusatambira mari.
Ungatengesa sei paVinted: matipi ayo achashanda kwazvo kwauri
Pamusoro pezvese maitiro aunofanirwa kuita kutengesa paVinted, iwe unofanirwa kufunga nezve "mateki" anoshanda uye kuita kuti zvigadzirwa zvako zvisvike kuvanhu vazhinji. Semuyenzaniso:
Nyora tsananguro yechigadzirwa
Sezvakatsanangurwa sezvazvinogona, nemazwi akakosha kana zvichigona, mazwi ayo vanhu vangangotsvaga paVinted. Nenzira iyoyo iwe unove nechokwadi chekuti iyo app yekutsvaga algorithm inowana zvigadzirwa zvako.
Vamwe vanokurudzira kuti rondedzero yacho ive muchiSpanish, French neDutch. Icho chikonzero ndechekuti nyika idzi ndidzo dzinoshandisa chishandiso zvakanyanya, uye nekudaro iwe unozopa rondedzero mumutauro wavo. Tinokurudzira kuti iwe ubatanidzewo Chirungu.
Wedzera mamwe ma hashtag sezvavanoshanda zvakafanana nemuma social network uye vanofarira kushanyirwa kuzvinyorwa zvako nekusimudzira kwavo.
Gadza mitengo inokwanisika
Zvakanakisa ndezvekuti usaise mitengo inodarika makumi maviri euros. Kazhinji vanhu havawanzo vatarisa kupfuura ma15 euros, nekuti tiri kutaura nezvezvigadzirwa zvakamboshandiswa, saka edza kuisa mutengo unonyatsomiririra kutengeserana kana kupihwa.
Zviripachena, kana icho chigadzirwa chiri kudhura, iwe uchafanirwa kutevedzera icho, asi mune idzo kwaunogona kuwana mari shoma shoma, tora mukana wekutengesa zvimwe.
Tarisa pane imwechete theme
Kutengesa mbatya, kutengesa zvigadzirwa zvemagetsi, kutengesa ... Zvakanaka kuti account yako yasiyanasiyana, asi kana iwe ukatarisa kune imwe mhando yechinhu, icho chine maitiro, icho chinotengwa zvakanyanya, kuedza kwako kunozowedzerwa mubayiro, nekuti ivo uchaenda kuaccount yako kunotsvaga zvigadzirwa nekuti ivo vanoziva iwe uri nyanzvi pazviri.
Ehezve, kana iwe uchinge wapera, iwe unogona kugara uchichinja theme uye kuyedza vamwe. Chinhu chakadai se "shoma stock iyo yaunoramba uchichinja."
Fungidzira kuti une mamwe mateki ausingade uye iwe uri kuzoatengesa. Unovatora, wovaisa patafura uye unotora pikicha. Iye zvino funga nezvemufananidzo iwoyo dai wainge wapedza maminetsi makumi maviri uchiachenesa, uchiisa tambo zvakanaka, kuisa mwenje wakaringana uye kutora mafoto akati wandei kubva kumakona akasiyana kuratidza kuti vari muchimiro chakakwana.
Kana iwe ukaona maviri ma ads, imwe ine pikicha yakatorwa nekukurumidza uye imwe kwavakave vakangwarira, pamutengo mumwe chete, ndeupi waungatore? Zvakanaka, zvimwe chete zvinoitika pano; mufananidzo ndizvo zvese saka shandisa nguva kutora mifananidzo yakanaka. Izvo zvichavandudza kuoneka kweako ma ads.
Yakapendwa, inobatsira here?
Mubvunzo mukuru waungave uchizvibvunza wega nekudzokororazve ndeyekuti kana zvichinyatso kukosha kuedza kuisa zvese zvauinazvo zvekutengesa uye kana zvichinyatso kutengesa. Chinhu chekutanga iwe chaunofanirwa kuziva ndechekuti zvese zvinogona kutengeswa kana zvikaiswa mutengo nenzira kwayo. Semuenzaniso, mhete yegoridhe inotengesa kana iwe ukaisa 1 euro pairi; asi zvakafanana hazvizoitika kana iwe ukaisa 1000 euros (kana zvirinani zvichazonyanya kuomarara).
Pano izvo zvaunofanirwa kuchengeta mundangariro ndezvekuti tiri kutaura pamusoro pechipiri-ruoko mbatya uye zvishongedzo. Kunyangwe iwe usati wazvishandisa, kune vanhu ivo havazi vatsva uye izvo zvinofanirwa kukanganisa mutengo. Tinorevei? Kuti iwe haugone kukumbira "senge nyowani" mutengo pane chigadzirwa chisiri chitsva.
Kana iwe ukatora nguva shoma kuti uone Maonero aVinted paInternet, chokwadi ndechekuti iwe unowana akawanda, ese akanaka uye asina kunaka. Zvese zvinoenderana neicho chiitiko chauinacho. Vamwe vanoti unowana pakati pe200 ne300 euros pamwedzi, asi kuti uwane izvozvo, unofanirwa kushambadza nekusimudzira yakawanda, zvinotora nguva. Izvo zvigadzirwa hazvisi kuzozvitengesa pachavo, kunze kwekunge chiri chimwe chinhu icho vanhu vazhinji vari kutsvaga. Uye zvakare, mutengo unotambira kana kupokana, nekuti vamwe havazoda kubhadhara mutengo waunobvunza, kana zvinoita sekunge zvakadhura uye voedza kubiridzira. Saka purofiti inozopedzisira yave kushoma pane zvaunogona kufunga.
Mukupedzisa, tinogona kutaura izvozvo Kutengesa paVinted kunogoneka, zviri nyore kana ukazviita kubva pakutanga uye zvinogona kukuunzira mabhenefiti. Asi kwete kuda kusiya basa rako kana kudurura imba yako kune zvese izvo zvisingakushumire uye kuzvizadza. Kunyangwe kana iwe uri kuwana zvishoma zvishoma iwe unogona kuve nekuwedzera pakupera kwemwedzi zvinonaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Kutengesa nhare » Ungatengesa sei paVinted
Aliexpress, yakavimbika here?